လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၊ အသက်အရွယ်နှင့်ရောဂါဘ ၀ ကိုအပြုအမူစွဲလမ်းမှု (လိင်စွဲ) အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ (2018) - Porn တွင်သင့် ဦး နှောက်
(လိင်စွဲအပါအဝင်) အပြုအမူစွဲမှလိင်, စရိုကျမြား, စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်နှင့် Disorder Duration: များ၏အလှူငှပေး။ (2018)
တပ်ဦးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2018 အောက်တိုဘာ 16; 9: 497 ။ Doi: 10.3389 / fpsyt.2018.00497 ။
Valero-မြေဆီ S က1, Granero R ကို2,3, Fernandez-Aranda က F2,4,5, ဘဏ္ဍာစိုး T က2,4, Mestre-Bach, G2,4, Mallorquí-Bagué N ကို2,4, Martin-Romera V ကို6, Aymamí N ကို4, ဂိုမက်ဇ-Pena M က4, del Pino-Gutierrez တစ်ဦးက7, Baño M က4, Moragas L ကို4, Menchón JM4,5,8, Jimenez-Murcia S က2,4,5.
နောက်ခံသမိုင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပျံ့နှံ့မှုတိုးများလာခြင်းသည်ဤရောဂါများအတွက်အန္တရာယ် / အကာအကွယ်ဖြစ်စေသည့်အချက်များ၏တိကျသောပံ့ပိုးမှုများကို etiological research သုတေသနတွင်တိုးတက်စေခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလူနာများ၏လိင်၊ အပြုအမူစွဲလမ်းမှု၏လက်တွေ့အခြေအနေနှင့်ရောဂါစတင်ခြင်းနှင့်ရောဂါကြာချိန်တို့၏ဆွေမျိုးအခန်းကဏ္roleကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
နည်းလမ်းများ: ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (GD, ရောဂါကုသမှု-ရှာကြံလူနာပါဝင်သည် n = 3,174), အင်တာနက်လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ (IGD, n = 45), compulsive ဝယ် (CB, n = 113), နှင့်လိင်စွဲလမ်း (SA, n = 34) ။
ရလဒ်များ: လွတ်လပ်သော variable တွေကိုနှင့်ရလဒ်များပြင်းထန်စွာအမူအကျင့်စွဲမျိုးကွဲနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်တို့အကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏ပုံစံ: GD-မိန်းမတို့အဘို့အစောပိုင်းစတင်ခြင်းအသစ်အဆန်းရှာချိတ်ဆက်နေစဉ် (က) GD-ယောက်ျားများအတွက်ရောဂါ၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်း, GD ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည် ; (ခ) IGD-ယောက်ျား, စွဲပြင်းထန်မှု, ပိုဆိုး psychopathological ပြည်နယ်နှင့်မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့် Self-TRANSCEND အဆင့်ဆင့်ဆက်နွယ်နေကြောင်းနှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခြင်းသည် ဖြစ်. , (ဂ) သမဝါယမ-မိန်းမတို့အဘို့စောစောစတင်ခြင်းပိုမိုမြင့်မားဆုလာဘ်-မှီခိုရမှတ်များနှင့်အနိမ့် Self-TRANSCEND အဆင့်နှင့်အဆင့်မြင့်တိုးပွားလာသောအကြွေးတွေဟောကိန်းထုတ်ရှည်ကြာချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်; သမဝါယမ-ယောက်ျား, အစောပိုင်းစတင်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်-ရှောင်ရှားခြင်းအတွက်မြင့်မားသောရမှတ်များ, Self-ညွှန်ကြားထား, Self-TRANSCEND နှင့်သမဝါယမဆက်နွယ်နေကြောင်းရှည်လျားကြာချိန်သည် ဖြစ်. , နှင့်မြင့်မားရောဂါပြင်းထန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းလုပ် SA-ယောက်ျားနှောင်းပိုင်းစတင်ခြင်းနှင့်ကြာကြာကြာချိန်များအတွက် (ဃ) ။
KEYWORDS: အသက်အရွယ်; အမူအကျင့်စှဲ; compulsive ဝယ်; လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ; အင်တာနက်လောင်းကစားရောဂါ; လိင်စွဲလမ်း
အမူအကျင့်စှဲပြင်းထန်ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ (၏အသိပညာနေသော်လည်းဇွဲပေးသွားနိုင်စေခြင်းငှါအတိုရေရှည်အကျိုး, Non-ပစ္စည်းဥစ္စာ-related အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မလှူဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအခြေအနေများတစ်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောအုပ်စုတစ်စုတို့ပါဝင်သည်1-3) ။ ဒီပြဿနာတွေကို၏သင်တန်းကာလအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီ (ထိုမိသားစုထဲမှာနောက်ဆက်တွဲသိသာထင်ရှားသောချို့ယွင်းနှင့်အတူအလွန်အကျွံသို့မဟုတ်ပြဿနာအပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်, အလုပ်နှင့်သူတို့၏ဘဝများ၏လူမှုရေးဒေသများဆုံးရှုံး4, 5) ။ အခြေအနေကို၏အစောပိုင်းအဆင့်၌, Impulse ၏မြင့်မားချက်ချင်းဆုလာဘ် (အပြုသဘောအားကောင်း) ရယူရည်ရွယ်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်အခြေအနေသင်တန်းကာလအတွင်း, အစွဲလမ်းအပြုအမူ compulsive ဖြစ်လာသည်နှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ (အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်) လျော့ကျလာရည်ရွယ်နေသည် (6) ။ သုတေသနဒီမျဉ်းအတွင်းကရှုထောင်နှင့် transdiagnosis ခွဲခြားမှုပိုကောင်းလက္ခဏာတွေထပ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွသောဤအခြေအနေများအတွက် shared လက်တွေ့ features တွေ, comorbidity နှင့်ကုသမှုပင်တုန့်ပြန် (ရှင်းပြနိုင်စောဒကတက်ထားသည်2).
အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏အများဆုံးပျံ့နှံ့ Subtype ရောဂါ (GD), compulsive ဝယ် (CB), လိင်စွဲလမ်း (SA) နှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ (IGD) လောင်းကစားနေကြသည်။ (ထိုကဲ့သို့သောသမဝါယမ, SA နှင့် IGD ကဲ့သို့) ကိုအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းအပါအဝင်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဆွေးနွေးဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်နေစဉ် DSM-5 ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း, GD "ပစ္စည်း-ဆက်စပ်နှင့်စွဲခြင်းရောဂါ" အမည်ရှိသစ်ကိုအဖြေရှာတဲ့အမျိုးအစားတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ် ပင်ကိုယ်မူလအထောက်အထားမရှိခြင်းကြောင့်။
အမူအကျင့်စွဲလမ်းနှစ်ဦးစလုံးလေ့လာခြင်း၏လူပေါ်ပေါက်ပေမယ်ပျံ့နှံ့အဆိုပါမျိုးကွဲပေါ်မူတည်ကွဲပြားခြားနား: အမျိုးသမီးတွေသမဝါယမ၏မြင့်မားသောနှုန်းထားသတင်းပို့စဉ်လူတို့သညျ (GD, IGD နှင့်လုပ် SA အတွက်ပိုမိုမြင့်မားရာခိုင်နှုန်းသတင်းပို့7) ။ အသက်အရွယ်နှင့် ပတ်သက်. ဤပုံမမှန်ဘဝသံသရာတစ်လျှောက်လုံးပေါ်ပေါက်ပေမယ့်နှစ်ဦးကိုအဆင့်ဆင့်မြင့်မားသောအားနည်းချက်ရှိဟန်: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် / အစောပိုင်းလူကြီးအဟောင်းအသက်အရွယ် (8).
စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်များ၏အလှူငွေရှာဖွေစူးစမ်းလေ့လာရေးတစ် maladaptative အဖြစ်လောင်းကစားဝိုင်းကိုအသုံးပြုဖို့သူကား, အကြာတွင်စတင်ခြင်းနှင့်အတူလူနာစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပိုမိုအားနည်းချက်နဲ့မျိုးကွဲဖွဲ့စည်းသော်လည်းအစောပိုင်းစတင်ခြင်းနှင့်အတူလူနာ antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့် Impulse ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းနဲ့အဖွဲ့ခွဲဖွဲ့စည်းရန်ကြောင်းအကြံပြု သူတို့ရဲ့အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှု (modulate မှယန္တရား9, 10) ။ (ကနောက်ပိုင်းမှာစတင်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) GD ၏အစောပိုင်းစတင်ခြင်းလည်းစပျစ်သီးပြွတ် B ကိုကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားပျံ့နှံ့, ခံစားချက်မမှန်တစ်နိမ့်ပျံ့နှံ့နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ပုံရသည်, Self-ညွှန်ကြားအတွက်ရမှတ်များရှာကြံနှင့်အနိမ့်သည့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုအာရုံခံစားမှုအတွက်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ် (11, 12).
သမဝါယမနှင့်စပ်လျဉ်း imprecise နှင့်စိတ်မချရပျံ့နှံ့ရလဒ်များနမူနာ, အဓိပ္ပာယ်နှင့်တိုင်းတာခြင်းတူရိယာ (များ၏ဇာစ်မြစ်ပေါ် မူတည်. % 1 မှ 20 ကနေအထိအစီရင်ခံခဲ့ကြ13-17) ။ သမဝါယမများအတွက်တည်ဆဲ့ epidemiological data လည်းသမဝါယမနှင့်အတူကုသမှု-ရှာကြံလူနာအများအားဖြင့် comorbid အရက်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုသုံးမမှန်, ခံစားချက်မမှန်အစာစားခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်နှင့်အခြားချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ခြင်း (အတူမျိုးစုံစိတ်ရောဂါအခြေအနေများမှပင်ဆင်းရဲကြောင်းပြသကြ18) ။ သမဝါယမအဘို့ခိုင်ခံ့လိင်-မှီခိုကွဲပြားခြားနားမှုဖော်ပြထားပြီ: အလွဲသုံးစားလုပ်၏ Initiative နှင့်ကြိမ်နှုန်း၏အန္တရာယ်, ပျံ့နှံ့နှင့်နှုန်းထားများမိန်းမတို့အဘို့မြင့် (1).
IGD အပေါ်ဗဟိုပြုလေ့လာရေး (3.7 နှင့် 13.0 ကြားရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူယေဘုယျလူဦးရေရဲ့% ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်စံနှုန်းများနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ကြောင်းညွှန်ပြ19, 20), နှင့် IGD ငယ်ရွယ်နမူနာပိုမိုပျံ့နှံ့ကြောင်း (21) ။ IGD ၏ဆက်စပ်မှုမြင့်မားသောအန္တရာယ်-ယူပြီးအပြုအမူတွေ၏အဆင့်ဆင့်နှင့် Impulse, ပိုမိုမြင့်မားနှောင့်နှေးလျှော့, လူမှုရေးငြင်းပယ်ခံရခြင်းနှင့်လူ့ပဋိပက္ခအတွင်းမြင့်မားတဲ့အဆင့်အတန်းမြင့်မား sensitivity ကို, အန္တရာယ်-ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်လူ့ပဋိပက္ခ (ပါဝင်သည်22-24).
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လုပ် SA အပေါ်သုတေသနပြု (ယောက်ျားတို့အတွက်ပျံ့နှံ့မိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ်လျှင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိုမိုမြင့်မားကြောင်းကောက်ချက်ချ25-28) ။ ပိုမိုမြင့်မားသောလူမှုစီးပွားရေးအဆင့်အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များအာရုံရှာခြင်းနှင့်နိမ့်ရမှတ်မြင့်မားရမှတ် (SA များအတွက်အန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ကြသည်29, 30) ။ တချို့က etiological လေ့လာမှုများလုပ် SA antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, Impulse အတွက်ကြောက်ရွံ့ခြင်း, လူ့ဆိုထားပါသည်, egocentrism, နှင့်မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်၏မရှိခြင်း (မှဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြခဲ့ကြ31).
လက်ရှိအချိန်တွင်သာ GD အဆိုပါ DSM-5 များတွင်ပါဝင်သည်ဟူသောအချက်ကို (စိတ်ရောဂါအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့် ပတ်သက်. သဘောတူညီမှုများမရှိခြင်းကနေဆင်းသက်လာ32) ။ ဤသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအခြားအပြုအမူစှဲစပ်လျဉ်း၌ဤရောဂါ၏မြင့်မားပျံ့နှံ့ရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ဒါဟာအစ (ပုံမမှန်အဖြစ်လက်ခံကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအခြေအနေများ၏ပျံ့နှံ့မှုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီ diagnostic tool များများဖယ်ရှားရှင်းလင်းရေးပါဘူးစိန်ခေါ်နေသည်33) ။ ဤအစှဲအဘို့အအဖြေရှာတဲ့စံရှိခြင်းထို့ကြောင့်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်း (များ၏ etiology, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုပိုမိုအသိပညာဘို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်34) ။ အလားတူပင်အခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ပါဝင်မှု (ပေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုတခုတခုအပေါ်မှာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့နှင့်ကုသမှုရှာလူနာများ၏တွန့်ဆုတ်လျှော့ချရန်ကူညီစေခြင်းငှါ,34).
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရဲ့အကောင်းဆုံးစေရန်, လေ့လာမှုများ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်စွဲ Subtype အပါအဝင်ဆေးခန်းသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနမူနာအတွက်စွဲလမ်းအပြုအမူ၏လိင်, စတင်ခြင်းနှင့်ကြာချိန်၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်အလှူငွေတိုင်းတာကြပါပြီ။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ GD, IGD, သမဝါယမနှင့်လုပ် SA ရောဂါလူနာရှာကြံကုသမှု၏လက်တွေ့ပြည်နယ်တွင်ဤ variable တွေကိုများ၏တိကျသောအလေးချိန်အကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နမူနာပါဝင်သည် n ဘာစီလိုနာ, စပိန်အတွက်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအထူးပြုတဲ့ဆေးရုံယူနစ်တက်ရောက်ခဲ့သည်ကြောင်း = 3,366 ဆက်တိုက်ကုသမှု-ရှာကြံလူနာ။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုကိုဇန်နဝါရီလ-2005 နှင့် Setember-2016 အကြားအရပ်ဌာနကိုယူ။ Inclusion စံတိုင်ပင်ဆွေးနွေးများအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်အဖြစ် GD, IGD, သမဝါယမ, ဒါမှမဟုတ်လုပ် SA များအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံတွေ့ဆုံနှင့်အသက် 18 နှစ်အတွင်းဖြစ်ခြင်းပါဝင်သည်။ ဖယ်စံတစ်ခုပညာတတ်မသန်စွမ်းသို့မဟုတ် (ထိုကဲ့သို့သော schizophrenia သို့မဟုတ်အခြား psychotic မမှန်သို့မဟုတ်စိတ်ကြွရောဂါကဲ့သို့) ပြင်းထန်တဲ့စိတ်ရောဂါရှိခြင်းခဲ့ကြသည်။
ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ comorbid ရှိနေခြင်းမှဖယ်ထုတ်လိုက်သင်တန်းသားများကိုအရေအတွက် (အနိမ့်ခဲ့n = 5, သမဝါယမ + SA နှင့်လုပ် SA + IGD နှင့်အတူ 1) နဲ့ GD + SA, 1 တင်ဆက်သူကို GD + သမဝါယမ,2သတင်းပေးပို့သူကို 1 လူနာ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, IGD နှင့်လုပ် SA ၏ subsamples အလွန်နည်းပါးအမျိုးသမီးတွေ (ဎ≤ 2) ပါဝင်သည်ကတည်းကအမျိုးသမီးသင်တန်းသားများသည်ဤနှစ်ခု subsamples တှငျအမြိုးသမီးမြား၏အလွန်အမင်းနိမ့်ကြိမ်နှုန်းကြောင့်ရလဒ်အတွက်အလားအလာဘက်လိုက်မှုမှရှောင်ရှားရန်, ဤအုပ်စုနှစ်စုကနေဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။
DSM လိုအပ်ချက်နှင့်အညီရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် diagnostic မေးခွန်းလွှာ (35)
ဤသည် 19-ကို item မေးခွန်းလွှာကို (DSM-5 ၏အကဲဖြတ်ဘို့ခွင့်ပြု32GD များအတွက်) အဖြေရှာတဲ့စံ။ (; မူရင်းဗားရှင်းအတွက်ပြင်ပလောင်းကစားဝိုင်းရမှတ်များနှင့်အတူ convergence တရားဝင်မှု (လောင်းကစားဝိုင်းကုသမှုအုပ်စုများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်နမူနာများနှင့်, r = 0.77 အဘို့, r = 0.75 အလွန်ကောင်းသည်35) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့စပိန်လိုက်လျောညီထွေအတွက် internal ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု (လောင်းကစားဝိုင်းကုသမှုနမူနာများအတွက်ယေဘုယျလူဦးရေနှင့်α = 0.81 များအတွက် = 0.77 αခဲ့သည်36) ။ ဒီလေ့လာမှုမှာ, GD များအတွက် DSM-5 စံ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကသုံးသပ်ခဲ့ပါသည်နှင့်ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုနမူနာအတွက် = 0.804 αခဲ့သည်။
compulsive ဝယ်ဘို့ diagnostic စံ (37)
သုတေသနအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကျယ်ပြန့်လက်ခံမှုကိုလက်ခံရရှိထားသောဤသတ်မှတ်ချက်သည်, နမူနာအတွက်သမဝါယမ၏ရှေ့မှောက်တွင်မှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ မေးခွန်းများကိုများ၏စာရင်း ( "ဝယ်ခြင်းနှင့်စျေးဝယ်အတူသဘောထားတွေ, ဆက်စပ်နေသောခံစားချက်များကို, အခြေခံအတှေးအများနှင့်အဆက်မပြတ်၏အတိုင်းအတာကိုဝယ်ယူ" စူးစမ်း38).
Griffiths ကနှင့် Hunt ကအညီ IGD များအတွက် diagnostic စံ (39, 40)
IGD ရောဂါအကဲဖြတ်ရန်နှင့်မှီခိုများ၏အဆင့်ကိုအဆိုပါရောဂါတည်ထောင်ရန်, လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်သူများက (Griffiths ကနှင့် Hunt ကကဒီဇိုင်းအတိုင်းအတာစဉ်းစားနေတဲ့မျက်နှာ-to-မျက်နှာအင်တာဗျူးကောက်ယူ39, 40) ။ ဒါကအင်တာဗျူးပုဒ်မအရသိရသည် [ဤကဲ့သို့သောပြဿနာအပြုအမူ၏ကြိမ်နှုန်းကြောင့်အင်တာနက်ဂိမ်း maladaptive အသုံးပြုမှုနေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်ထုတ်ပေးသည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု, သည်းခံခြင်းနှင့် abstinence စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အခက်အခဲများ၏ရှေ့မှောက်တွင်အဖြစ် DSM-5 စံ၏နံပါတ်အဖြစ်ရှုထောင့်အကဲဖြတ် III ကို, (32)] ။
လိင်စွဲလမ်းများအတွက် diagnostic စံ DSM-IV-TR သည်နှင့်အညီ (32)
SA အကဲဖြတ်ရန်, ပစ္စည်းများကိုတစ်ဘက်ထရီအဆိုပါ DSM-IV-TR (ထဲတွင်အဆိုပြုထားချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့ကြသည်သောအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်41) ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မသတ်မှတ်ထားပါအပိုင်း (302.9) ၌တည်၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကဲဖြတ်ရာတွင်အောက်ပါလက်တွေ့ဖော်ပြချက်အထူးအလေးခြိနျပေးထားခဲ့သည်: "။ သာအသုံးပြုစေသောအရာတို့ကိုအတိုင်းတစ်ဦးချင်းအားဖြင့်ကြုံတွေ့ကြသူချစ်သူတွေတစ်ဆက်ခံပါဝင်သောထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာတစ်ပုံစံအကြောင်းကိုဒုက္ခဆင်းရဲ"
စိတ်ထားနှင့်အကျင့်စာရိတ္တစာရင်း-ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော (TCI-R) (42)
လေးစိတ်ထား (အသစ်အဆန်းရှာ, အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်း, မှီခိုနှင့်ဇွဲဆုချ) နှင့်သုံးဇာတ်ကောင်အတိုင်းအတာ (Self-ညွှန်ကြားထား, သမဝါယမနှင့် Self-TRANSCEND): ဒါကခုနစျပါးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတိုင်းအတာကိုတိုင်းတာတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တရားဝင် 240-ကို item မေးခွန်းလွှာဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းများအားလုံးတစ်ဦး 5-အမှတ် Likert-type အမျိုးအစားစကေးအပေါ်တိုင်းတာလျက်ရှိသည်။ တစ်ဦးကအတည်ပြုစပိန်ဗားရှင်း (သုံးခဲ့43) ။ စပိန်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဗားရှင်းမှချိန်ခွင်များသည်လုံလောက်သောအတွင်းပိုင်းကိုက်ညီမှုကိုပြသည် (Cronbach ၏ alpha α mean value of 0.87) ။ လေ့လာမှုတွင်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုညွှန်းကိန်းများသည်ကောင်းမွန်သော (α = ၀.၇၀ အသစ်ရှာဖွေသည့် subscale အတွက်) အလွန်ကောင်းသော (ဇွဲ subscale အတွက်α = 0.70) အထိပြောင်းလဲသည်။
ဤသည်မေးခွန်းလွှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ psychopathological လက္ခဏာတွေကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးတန်ဖိုး။ ဤသည်မေးခွန်းလွှာ 90 ပစ္စည်းများပါဝင်သည်ကိုးမူလတန်းလက္ခဏာရှုထောင့်တိုင်းတာ: somatization, စွဲ-မလှူ, လူ့ sensitivity ကို, စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, ရန်လိုမုန်းတီးမှု, phobic စိုးရိမ်စိတ်, အကြောက်လွန်ရောဂါ ideation နှင့် psychoticism ။ ဒါဟာအစသုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညွှန်းကိန်းများပါဝင်သည်: (1) ခြုံငုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြင်းထန်မှုအညွှန်းကိန်း (GSI), ရောဂါ၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာရန် (2) တစ်ဦးအပြုသဘောလက္ခဏာဒုက္ခဆင်းရဲအညွှန်းကိန်း (PSDI), နှင့် (3) Self-အစီရင်ခံရောဂါလက္ခဏာတွေကိုထင်ဟပ်စေမယ့်အပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာစုစုပေါင်း (PST) ။ တစ်ဦးကအတည်ပြုစပိန်ဗားရှင်း (သုံးခဲ့45) ။ စပိန်၏အတည်ပြုမှုစကေးသည်သုညဒသမ ၀.၅ (Cronbach ၏ alpha) နှင့်အတူစိတ်ဓာတ်ကျသောညွှန်းကိန်းများရရှိခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအတိုင်းအတာအဖြစ် GSI ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရမှတ်ကိုဆန်းစစ်သည် (ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာတွင်ကိုက်ညီမှုသည်ဤစကေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ α = 0.75) ။
အခြားအ sociodemographic နှင့်လက်တွေ့ variable တွေကို
အပိုဆောင်း, လူဦးရေဆိုင်ရာလက်တွေ့နှင့်လူမှုရေး / မိသားစု variable တွေကိုတခြားနေရာဖော်ပြထားတဲ့ Semi-ဖွဲ့စည်းပုံမှာမျက်နှာ-to-မျက်နှာလက်တွေ့အင်တာဗျူး (ကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းတာခဲ့ကြသည်46) ။ (; ဖုံးလွှမ်း variable တွေကိုရောဂါစတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်သည် Hollingshead အညွှန်းကိန်းမှတဆင့်တိုင်းတာသည့်စွဲလမ်းနှင့်လူမှုရေးအဆင့်အတန်းကြောင့်စုဆောင်းအကြွေးတွေ (ကျောင်းနေပညာရေးဆိုင်ရာနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ဂုဏ်သိက္ခာအပေါ်အခြေခံပြီးလူတစ်ဦးချင်းစီ၏လူမှုရေးအဆင့်အတန်းကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲစစ်တမ်းတစ်ခုပါဝင်သည်47).
စိတ်ပညာရှင်နှင့်စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်ကြုံတွေ့, စွဲလမ်းမမှန်၏လယ်ပြင်တွင်လက်တွေ့အတွေ့အကြုံထက်ပို 15 နှစ်ပေါင်းအတူလက်တွေ့သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းစီလူနာများ၏လက်တွေ့ရောဂါသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက်နှစ်ဦးကိုမကျြနှာကို-to-မျက်နှာလက်တွေ့အင်တာဗျူးများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုမှာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအားလုံးသည်အစီအမံကုသမှု၏အစမှယခင်ယင်းအခြေခံမှာအကဲဖြတ်ဖို့ကိုက်ညီတဲ့။
စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်မှုကို Windows အတွက် Stata 15 ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Pearson ၏ဆက်နွယ်မှုကိန်းများသည်စတင်ခြင်း၏သက်တမ်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လက်တွေ့ပုံသဏ္ဌာန်တို့နှင့်အတူစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူ၏ကြာချိန်အကြားဆက်စပ်မှုကိုတိုင်းတာသည်။ လူနာများ၏လိင်၊ စတင်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေအပေါ်ပြproblemနာ၏ကြာချိန်၏တိကျသောထည့် ၀ င်မှုသည်အနိမ့်အနိမ့်အနိမ့်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းမှုနှင့် linear multiple regression (cululate даўгоўနှင့် SCL-90-R GSI ရမှတ်များအတွက်) ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ ဤရွေ့ကားမော်ဒယ်များပါဝင်သည်နှင့်စမ်းသပ်ပြီးလိင် -by- စတင်ခြင်းနှင့်လိင် -by- ကြာချိန်: (က) သက်ဆိုင်ရာအပြန်အလှန် parameters တွေကိုအဘို့, သင်တန်းသားများကိုရဲ့အသက်အဘို့အတစ်ခုတည်းသက်ရောက်မှုအရွယ်၏ 1 နှင့်3အဘို့အသတ်မှတ်အုပ်စုများသုံးခုသို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြသည် စတင်ခြင်း [အစောပိုင်း (အသက် ၂၀ မတိုင်မီစတင်ခြင်း)၊ အလယ်အလတ် (အနှစ် ၂၀ မှ ၃၅ နှစ်အကြား) နှင့်နှောင်းပိုင်း (၃၅ နှစ်အကြာစတင်ခြင်း)]; နှင့် (ခ) သက်ဆိုင်မှုမရှိသည့်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုဆိုင်ရာ parameters များကိုအဓိကသက်ရောက်မှုများကိုခန့်မှန်းပြီးအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရောဂါရှာဖွေအမျိုးအစားခွဲ (GD, CB, IGD နှင့် SA) အတွက်သီးခြားပုံစံများရရှိခဲ့သည်။ IGD နှင့် SA တို့အတွက်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုလေ့လာခြင်းမပြုခဲ့ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အုပ်စုများတွင်အကြိမ်အရေအတွက်နည်းသောကြောင့်ဤတဆင့်ခွဲများတွင်အမျိုးသမီးများပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
ဒီလေ့လာမှုကဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ Bellvitge တက္ကသိုလ်ဆေးရုံ (ဘာစီလိုနာ, စပိန်) ၏ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကလေ့လာမှုအတည်ပြုခဲ့နှင့်အသိပေးသဘောတူညီခကျြအားလုံးနောက်ဆုံးသင်တန်းသားများထံမှရရှိသောခဲ့သည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
စားပွဲတင်၏အထက်ပိုင်းတစ်ဝက် ​Table11 လေ့လာမှု sociodemographic variable တွေကိုများ၏ဖော်ပြချက်များပါဝင်သည်။ , စုစုပေါင်းနမူနာ 42.5 နှစ်ပေါင်း-နှစ်အရွယ်မှာ (အသက်၏ 13.5 နှင့် 18 နှစ်အကြားအကွာအဝေးနှင့်အတူ SD က = 75,) အတွက်အချိန်နဲ့တပြေးညီအသက်အရွယ်ဆိုလိုသည့်အမူအကျင့်စွဲများအတွက်စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်ကိုဆိုလိုတာ (SD က = 29.9) နှင့်ယုတ် 11.5 နှစ်ပေါင်း-နှစ်အရွယ်မှာ အဆိုပါရောဂါ၏ကြာချိန် 6.2 နှစ်ပေါင်း (SD က = 5.9) ဖြစ်ခဲ့သည်။
နမူနာဖော်ပြချက်: sociodemographic နှင့်လက်တွေ့ variable တွေကို။
သမဝါယမ; n = 113
အမျိုးသမီး 283 8.900 85 75.200 502.6
ယောက်ျား 2891 91.1 45 100 28 24.8 34 100
စပိန် 2934 92.4 39 86.7 111 98.2 33 97.1 8.65 0.034
ဝင်နေသူ 240 7.6613.321.8 1 2.9
မူလတန်း 1905 60.0 24 53.3 43 38.1926.5 85.40
secondary 1092 34.4 20 44.4 46 40.7 16 47.1
တက္ကသိုလ်က 177 5.6 1 2.2 24 21.2926.5
တခုတည်းသော 1212 38.2 41 91.1 43 38.1926.5 57.43
အိမ်ထောင်သည် - လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် 1534 48.336.7 51 45.1 17 50.0
ကွာရှင်း - ကွဲကွာ 428 13.5 1 2.2 19 16.8 8 23.5
မြင့်သော 46 1.4 1 2.243.525.9 53.27
အလတ်စားမြင့် 138 4.300.0 18 15.9411.8
အလယ်အလတ် 339 10.7613.3 14 12.4411.8
အလတ်စား-အနိမ့် 967 30.5 12 26.7 32 28.3 14 41.2
အနိမ့် 1684 53.1 26 57.8 45 39.8 10 29.4
အလုပ်လက်မဲ့သော 1414 44.5 36 80.0 53 46.9 15 44.1 22.69
အလုပ် 1760 55.5920.0 60 53.1 19 55.9
အဘယ်သူမျှမ 374 11.824.4 13 11.525.9 3.43 0.330
Yes 2800 88.2 43 95.6 100 88.5 32 94.1
ဆိုလို SD ဆိုလို SD ဆိုလို SD ဆိုလို SD F P
အသက် AGE, စတင်ခြင်းနှင့်ကြာချိန်
(အနှစ်အရွယ်) အသက်အရွယ် 42.8 13.5 22.6 8.4 42.6 11.5 42.6 11.9 33.76
စတင်ခြင်းရောဂါ (အသက်) 29.9 11.5 19.3 8.1 32.9 12.0 33.7 13.0 16.82
Duration: ရောဂါ (yrs) 6.2 6.0 3.3 2.5 6.8 5.8 6.0 5.7 3.90 0.009
GSI ရမှတ် 1.05 0.72 0.86 0.76 1.58 0.91 1.25 0.78 20.21
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစရိုက်များ: TCI-R ကို
အသစ်အဆန်းရှာ 108.9 14.3 103.7 13.1 114.9 14.4 110.8 14.3 7.85
အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်း 101.1 17.0 102.6 22.8 111.0 19.7 102.1 17.5 10.80
မှီခိုဆုချ 98.5 14.8 92.3 17.1 103.2 17.0 100.5 15.2 5.84 0.001
ဇှဲကောငျးခွငျး 108.5 20.1 93.6 20.8 106.8 18.8 103.6 21.1 8.20
self-ညွှန်ကြား 127.0 21.1 127.1 25.7 124.1 23.9 116.9 19.6 2.91 0.033
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း 130.4 16.3 126.8 18.5 133.9 15.7 127.4 15.1 2.57 0.053
self-TRANSCEND 64.0 15.3 57.2 14.1 65.4 16.5 63.1 14.0 2.97 0.031
GD: လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါ။ IGD: အင်တာနက်ဂိမ်းကစားဖရိုဖရဲ။ သမဝါယမ: compulsive ဝယ်။ SA: လိင်စွဲလမ်း.
SD က: စံသွေဖည်။ - ဤအတိုင်းအတာသည်ဤအုပ်စုသည်များအတွက်မရရှိနိုင်ခဲ့.
စားပွဲတင်၏အောက်ဆုံးထက်ဝက် ​Table11 အဆိုပါလက်တွေ့ variable တွေကိုနှင့်ရောဂါရှာဖွေ Subtype အကြားနှိုင်းယှဉ်၏ဖြန့်ဝေပြသထားတယ်။ အဆိုပါ IGD အုပ်စုသည်ရောဂါစတင်ခြင်းနှင့်ရောဂါကြာချိန်ပေါ်နိမ့်ဆုံးအသက်အရွယ်နှင့်အတူအငယ်ဆုံးသင်တန်းသားများ, ပါဝင်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရမှတ်များနှင့်စပ်လျဉ်းသမဝါယမ GD အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, မှီခိုနှင့် Self-TRANSCEND ဆုချ, တစ်ဖွဲ့လုံးကအန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းအသစ်အဆန်းရှာအတွင်းအမြင့်ဆုံးရမှတ်ထောက်ခံ။
စားပှဲ ​Table22 လက်တွေ့ဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်အတူအသီးအသီးအမူအကျင့်စွဲ၏စတင်ခြင်း (အသက်) ၏အသက်အရွယ်နှင့်ကြာချိန်အကြားအသင်းအဖွဲ့ (နှစ်) အကဲဖြတ်ရန်ဖို့ဆက်စပ်မှု matrix ကိုပါဝင်သည်။ နှစ်ခုအသင်းအဖွဲ့များပေါ်ထွက်လာသည့် GD အုပ်စု: အထီး Sub-နမူနာထဲမှာအစောပိုင်းစတင်ခြင်း DSM-5 စံ၏မြင့်မားသောအရေအတွက်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်, မိန်းမကိုခွဲနမူနာထဲမှာအစောပိုင်းစတင်ခြင်းပိုမိုမြင့်မားအသစ်အဆန်းရှာရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
လက်တွေ့နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များနှင့်အတူ BA ဘွဲ့များစတင်ခြင်းနှင့်ကြာချိန်၏အသက်အရွယ်အကြားအသင်းမှ။
အမြိုးသမီးမြား ဎ = 283
လူတို့သညျ ဎ = 2,891
လူတို့သညျ ဎ = 45
အမြိုးသမီးမြား ဎ = 85
လူတို့သညျ ဎ = 28
လူတို့သညျ ဎ = 34
DSM-5 စုစုပေါင်းစံ -0.24 0.10 -0.19 0.05 0.44 -0.05 - - - - - -
တိုးပွားလာသောအကြွေးတွေ -0.14 0.00 -0.01 0.04 - - -0.15 0.25 0.03 0.18 -0.59 0.50
GSI ရမှတ် -0.11 0.04 -0.04 0.10 0.25 0.11 -0.03 0.06 0.36 -0.11 -0.18 0.07
အသစ်အဆန်းရှာ -0.18 0.15 -0.25 0.02 0.01 -0.05 -0.19 -0.04 -0.05 0.23 0.16 -0.14
အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်း -0.15 -0.06 0.07 0.07 0.26 0.08 -0.12 -0.12 0.34 -0.21 -0.08 0.07
မှီခိုဆုချ 0.02 0.06 0.04 -0.07 -0.10 -0.11 -0.27 0.07 -0.07 0.17 0.17 -0.06
ဇှဲကောငျးခွငျး -0.02 -0.06 -0.03 -0.07 -0.10 0.02 0.02 0.12 -0.01 0.27 -0.18 0.09
self-ညွှန်ကြား 0.06 -0.04 0.06 -0.09 -0.23 -0.15 0.07 0.09 -0.25 0.25 -0.03 0.14
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း 0.01 0.00 0.09 -0.07 -0.13 -0.06 -0.05 0.13 -0.28 0.01 0.02 0.24
self-TRANSCEND 0.19 -0.03 0.16 0.05 0.35 0.22 0.29 0.08 0.19 0.31 0.01 0.08
မှတ်စု။ GD, လောင်းကစားရောဂါ; IGD, အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါ; သမဝါယမ, compulsive ဝယ်; SA, လိင်စွဲလမ်း.
မှတ်စု။ ရဲရင့်: ကောင်းသောအကွာအဝေး (| r ကို>> 0.24) မှအလယ်အလတ် (| r ကို> 0.37) သို့ဆက်စပ်မှု။ - ဤအုပ်စုအတွက်မရပါ.
သမဝါယမနှင့်အတူရောဂါအမြိုးသမီးမြားအဘို့, စတင်ခြင်း၏ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်ပိုမိုမြင့်မားဆုလာဘ်-မှီခိုရမှတ်များနှင့်အနိမ့် Self-TRANSCEND အဆင့်ဆင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ခဲ့ပါသည်, ထိုပြဿနာများ၏ရှည်ကြာချိန်ပိုမိုမြင့်မားတိုးပွားလာသောအကြွေးတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒီရောဂါရှာဖွေမျိုးကွဲ (CB) တွင်လူတို့သညျအဘို့: (က) စတင်ခြင်း၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ် SCL-90R ရမှတ်များနှင့်အန္တရာယ်-ရှောင်ရှားခြင်းအဆင့်ဆင့်များနှင့်မြင့်မားသော Self-ညွှန်ကြားနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရမှတ်များလျှော့ချရန်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်; (ခ) ဇွဲ, Self-ညွှန်ကြားနှင့် Self-TRANSCEND ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များအတွက်မြင့်မားတဲ့အဆင့်ကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းအဆိုပါရောဂါ၏ရှည်ကြာချိန်။
SA များအတွက်စံတွေ့ဆုံခဲ့သူကိုယောက်ျားအဘို့, ပိုမိုမြင့်မားကြာချိန်ပိုမိုမြင့်မားရန်လိုမုန်းတီးမှုရမှတ်မှဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
စားပှဲ ​Table33 မတူညီသောဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များအပြုအမူစွဲပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာပေါ်တွင်ရောဂါ၏လိင်, အသက်နှင့်ကြာချိန်၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်အလှူငွေတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါရှိသည်။ သီးခြားမော်ဒယ်များတစ်ဦးချင်းစီရောဂါ (GD, သမဝါယမ, IGD နှင့်လုပ် SA) အတွက်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီပြင်းထန်မှုအတိုင်းအတာ (DSM-5 စံ၏နံပါတ်, တိုးပွားလာသော debs နှင့် SCL-90R GSI ရမှတ်) အတွက်ရရှိသောပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, မော်ဒယ်-1 အထူး GD subsample များအတွက် DSM-5 စံ၏မှီခို variable ကိုအရေအတွက်ကိုအပေါ်လေ့လာချက် (လိင်, အသက်နှင့်ကြာချိန်) ၏လွတ်လပ်သော variable တွေကိုများ၏အလှူငွေအကဲဖြတ်ရန်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆုတ်ယုတ် non-စံချိန်စံညွှန်းမီ B-parameters တွေကို, စံအမှား (SE), 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ (ခများအတွက် 95% CI) အတွက်, (linear ဆုတ်ယုတ်ဘို့အနုတ်လက္ခဏာ-ဒွိစုံဆုတ်ယုတ်နဲ့ T များအတွက် Wald-chisquare) စာရင်းဇယားနှိုငျးယှဉျနှင့် p-values ​​အစီရင်ခံရသည်။
မတူညီသော BA ဘွဲ့ Subtype အပေါ်လိင်, စတင်ခြင်းနှင့်ကြာချိန်၏ပံ့ပိုးမှုများ။
95% CI (ခ)
လောင်းကစား disorders; n = 3,174
[မော်ဒယ်-1] aစံနှုန်း: DSM-5 စံ
(ကြားဖြတ်) 2.126 0.095 1.94 2.31 505.20 0.001
လိင် (0: မိန်းမတို့, 1: အထီး) -0.075 0.070 -0.21 0.06 1.16 0.282
Duration: (နှစ်) 0.002 0.003 0.00 0.01 0.44 0.508
စတင်ခြင်း၏ခေတ် (အသက်) -0.005 0.002 -0.01 0.00 9.18 0.002
[မော်ဒယ်-2] aစံနှုန်း: တိုးပွားလာသောအကြွေးတွေ
(ကြားဖြတ်) 10.068 0.256 9.57 10.57 1543.67 0.001
Duration: (နှစ်) 0.012 0.004 0.01 0.02 10.58 0.001
d(အစောပိုင်းစတင်ခြင်းသို့) လိင် 0.579 0.304 -0.02 1.18 3.63 0.057
d(အလယ်အလတ်စတင်ခြင်းသို့) လိင် 0.323 0.106 0.12 0.53 9.29 0.002
d(နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခြင်းသို့) လိင် 0.950 0.108 0.74 1.16 77.35
(အမြိုးသမီးမြားသို့) စတင်ခြင်း၏ခေတ် -0.027 0.007 -0.04 -0.01 16.28
(ယောက်ျားသို့) စတင်ခြင်း၏ခေတ် 0.023 0.002 0.02 0.03 106.92
အပြန်အလှန်: စတင်ခြင်းအားဖြင့်လိင် 0.050 0.007 0.04 0.06 50.62 0.001
[မော်ဒယ်-3] bစံနှုန်း: SCL-90R GSI
(ကြားဖြတ်) 1.703 0.158 1.39 2.01 10.74 0.001
Duration: (နှစ်) 0.011 0.002 0.01 0.02 5.08
d(အစောပိုင်းစတင်ခြင်းသို့) လိင် -0.433 0.163 -0.75 -0.11 -2.65 0.008
d(အလယ်အလတ်စတင်ခြင်းသို့) လိင် -0.634 0.074 -0.78 -0.49 -8.63
d(နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခြင်းသို့) လိင် -0.422 0.073 -0.57 -0.28 -5.76
(အမြိုးသမီးမြားသို့) စတင်ခြင်း၏ခေတ် -0.007 0.004 -0.02 0.00 -1.76 0.048
(ယောက်ျားသို့) စတင်ခြင်း၏ခေတ် -0.002 0.001 0.00 0.00 -1.46 0.143
အပြန်အလှန်: စတင်ခြင်းအားဖြင့်လိင် 0.005 0.004 0.00 0.01 -1.82 0.068
compulsive ဝယ်ယူ; n = 113
[မော်ဒယ်-4] aစံနှုန်း: တိုးပွားလာသောအကြွေးတွေ
(ကြားဖြတ်) 11.149 0.437 10.29 12.00 652.20 0.001
လိင် (0: မိန်းမတို့, 1: အထီး) -0.497 0.246 -0.98 -0.01 4.07 0.044
Duration: (နှစ်) 0.064 0.019 0.03 0.10 11.39 0.001
စတင်ခြင်း၏ခေတ် (အသက်) -0.022 0.012 -0.05 -0.00 3.64 0.050
[မော်ဒယ်-5] bစံနှုန်း: SCL-90R GSI
(ကြားဖြတ်) 1.861 0.342 1.18 2.54 5.44 0.001
Duration: (နှစ်) -0.010 0.016 -0.04 0.02 -0.66 0.508
d(အစောပိုင်းစတင်ခြင်းသို့) လိင် -0.430 0.572 -1.56 0.70 -0.75 0.453
d(အလယ်အလတ်စတင်ခြင်းသို့) လိင် -0.735 0.284 -1.30 -0.17 -2.59 0.011
d(နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ခြင်းသို့) လိင် 0.043 0.318 -0.59 0.67 0.13 0.893
(အမြိုးသမီးမြားသို့) စတင်ခြင်း၏ခေတ် -0.003 0.009 -0.02 0.01 -0.36 0.719
(ယောက်ျားသို့) စတင်ခြင်း၏ခေတ် 0.024 0.015 -0.01 0.05 1.61 0.112
အပြန်အလှန်: စတင်ခြင်းအားဖြင့်လိင် -0.733 0.406 -1.54 0.07 -1.81 0.074
အင်တာနက်လောင်းကစား disorders; n = 45 (မြိုးသားမြားသာ)
[မော်ဒယ်-6] aစံနှုန်း: DSM-5 စံ
(ကြားဖြတ်) 0.752 0.540 -0.31 1.81 1.94 0.164
Duration: (နှစ်) 0.005 0.072 -0.14 0.15 0.01 0.940
စတင်ခြင်း၏ခေတ် (အသက်) 0.020 0.021 -0.02 0.06 0.93 0.335
[မော်ဒယ်-7] bစံနှုန်း: SCL-90R GSI
(ကြားဖြတ်) 0.231 0.372 -0.52 0.983 0.62 0.539
Duration: (နှစ်) 0.051 0.049 -0.05 0.150 1.05 0.298
စတင်ခြင်း၏ခေတ် (အသက်) 0.023 0.014 -0.01 0.052 1.63 0.110
လိင်စွဲ; n = 34 (မြိုးသားမြားသာ)
[မော်ဒယ်-8] aစံနှုန်း: တိုးပွားလာသောအကြွေးတွေ
(ကြားဖြတ်) 14.942 1.237 12.52 17.37 145.88 0.001
Duration: (နှစ်) 0.151 0.193 -0.23 0.53 0.62 0.432
စတင်ခြင်း၏ခေတ် (အသက်) -0.259 0.045 -0.35 -0.17 32.84
[မော်ဒယ်-9] bစံနှုန်း: SCL-90R GSI
(ကြားဖြတ်) 1.651 0.449 0.74 2.57 3.68 0.001
Duration: (နှစ်) -0.005 0.025 -0.06 0.05 -0.18 0.856
စတင်ခြင်း၏ခေတ် (အသက်) -0.011 0.011 -0.03 0.01 -1.01 0.321
clinear ဆုတ်ယုတ်ဘို့အနုတ်လက္ခဏာ-ဒွိစုံဆုတ်ယုတ်နဲ့ T များအတွက် Wald-chisquare.
dကြောင့်စတင်ခြင်းအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာအပြန်အလှန်လိင်အကြောင်း, လိင်အဘို့တစ်ခုတည်းသက်ရောက်မှုစတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်သုံးအုပ်စုများသို့ရရှိသောခဲ့ကြသည်: အစောပိုင်း (20 အသက်မတိုင်မီစတင်ခြင်း), အလတ်စား (20 နှင့် 35-ဟောင်းနှစ်အကြားစတင်ခြင်း), နှောင်းပိုင်း (35 အသက်ပြီးနောက်စတင်ခြင်း) ။ ရဲရင့်: သိသာခန့်မှန်း (0.05 အဆင့်).
အဆိုပါ GD အုပ်စု, DSM-5 စံ၏မြင့်မားသောအရေအတွက်ကစတင်ခြင်း (ခ = -0.005 ၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှဆက်စပ်ခဲ့သည်; p = 0.0လူနာများ၏လိင် (သို့) ရောဂါ၏ကြာရှည်မှုအတွက်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုမရရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ဤသတ်မှတ်ချက်အတွက်လိင်နှင့်စတင်ခြင်းနှင့်ကြာချိန်တို့အကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်း (02) ​Table3) ။3) ။ အဆိုပါတိုးပွားလာသောအကြွေးတွေစံနှုန်းစားပွဲတင်အတွက် (မော်ဒယ်-2 စဉ်းစားသည်အခါဤ BA ဘွဲ့မျိုးကွဲများအတွက် ​Table3)3) ဒီအတိုင်းအတာရှည်ကြာချိန်နှင့်အတူလူနာတွေအတွက်တိုးပွါးနှင့်စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်လိင်တစ်ဦးအပြန်အလှန်ကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားခံခဲ့ရပါတယ်: (က) လိင်အဘို့တစ်ခုတည်းသက်ရောက်မှုယောက်ျားကပိုအကြွေးတွေ cumulate မှတော်မှာ, ဤခြားနားချက်စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်နှင့်အတူတိုးပွားလာကြောင်းပြသ ; နှင့်စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်အဘို့ (ခ) တစ်ခုတည်းသက်ရောက်မှုစတင်ခြင်း, အမြင့်တိုးပွားလာသောအကြွေးတွေဟာအကြွေးတွေယောက်ျားအဘို့, စတင်ခြင်းအဟောင်း, အမြင့်မားနေချိန်တွင်အမြိုးသမီးမြားအဘို့, အစောပိုင်းကကြောင်းပြသခဲ့သည်။
စားပွဲတင်အတွက် SCL-90-R ကို GSI စံနှုန်း (မော်ဒယ်-3 များအတွက် ​Table3),3), ဆိုးရွား psychopathological ပြည်နယ်အဆိုပါရောဂါ၏မြင့်မားကြာချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်စတင်ခြင်းအားဖြင့်အပြန်အလှန်လိင်လည်းဒီရလဒ်ကိုရှင်းပြဖို့သက်ဆိုင်ရာခဲ့သည်: (က) လိင်အဘို့တစ်ခုတည်းသက်ရောက်မှုအမျိုးသမီးများကိုအမြဲယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုမြင့်မား psychopathological အဆင့်ဆင့်မှတ်ပုံတင်, ဒါပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားကြောင်းသက်သေ ကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက်ရောဂါ (အမြင့်ဆုံးသက်ရောက် 20 နှင့် 35 အကြားစတင်ခြင်းများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပါတယ်) ၏စတင်ခြင်း၏အသက်အရွယ်အပေါ်မှီခို; အဆိုပါရောဂါ၏စတင်ခြင်းယောက်ျားတို့အတွက် GSI အဆင့်ဆင့်ရှင်းပြအတွက်သက်ဆိုင်ရာမဟုတ်ခဲ့စဉ်နှင့် (ခ) အဆိုပါရောဂါ၏စတင်ခြင်း၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ်, သာမိန်းမတို့အဘို့ဆိုးရွား psychopathological ပြည်နယ်၏စာရင်းအင်းခန့်မှန်းခဲ့သည်။
အဆိုပါသမဝါယမအုပ်စုကြောင့်ဇယားအတွက် (မော်ဒယ်-4 ဝယ်ယူမှအကြွေးတွေ cumulate ​Table3)3) ရှည်လျားသောကြာချိန်နှင့်စတင်ခြင်း၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူအမျိုးသမီးတိုးတက်လာခဲ့သည်။ လိင်နှင့်အသက်အရွယ်နှင့်ကြာချိန်အကြားဘယ်သူမျှမကအပြန်အလှန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါမော်ဒယ်ဇယားအတွက်သမဝါယမ (မော်ဒယ်-5 အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ psychopathological အဆင့်ချိန်ညှိ ​Table3)3) စတင်ခြင်းအားဖြင့်အပြန်အလှန်လိင်ထိန်းသိမ်းထား, ဤဆုတ်ယုတ်၏ရလဒ်များကိုပိုမိုဆိုးရွားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ပေမယ်သာဟောင်း 20 နှင့် 35 နှစ်ပေါင်းအကြားရောဂါ () များအတွက်စတင်ခြင်း၏အလတ်စားအရွယ်သတင်းပေးပို့သူကိုလူနာအဘို့, ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြိုးသမီးမြားအဘို့အမှတ်ပုံတင်ပြီးခဲ့ပြသခဲ့သည်။
အဘယ်သူမျှမမိန်းမတွေဟာဒီအုပ်စုများတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြကတည်းက IGD နှင့်လုပ် SA subsamples အဘို့, လိင်သည့်မော်ဒယ်များသို့မပါဝင်ခဲ့သည်။ IGD အဘို့, ကြာချိန်နှင့်စတင်ခြင်းမရှိစာရင်းအင်းအလှူငွေစားပွဲတင်အတွက် DSM-5 စံ၏နံပါတ် (မော်ဒယ်-6 ရှင်းပြဖို့ပေါ်ထွက်လာ ​Table3)3) နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ psychopathological အဆင့်ဆင့်စားပွဲတင်အတွက် (မော်ဒယ်-7 ​Table3) ။3) ။ အဆိုပါလုပ် SA အုပ်စုတွင်လူတို့သညျအဘို့, တိုးပွားလာသောအကြွေးတွေစားပွဲတင်အတွက်စတင်ခြင်း (မော်ဒယ်-8 ၏ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်နှင့်အတူလူနာတွေအတွက်တိုးလာ ​Table3),3), ကြာချိန်နှင့်စတင်ခြင်းစားပွဲတင်အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ် (မော်ဒယ်-9 မှမျှဝေသူမဟုတ်ကြစဉ် ​Table33).
ဒီလေ့လာမှုက, (ထိုရောဂါ၏ပြင်းထန်မှု, psychopathological အခြေအနေနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များအပါအဝင်) လက်တွေ့ phenotype အပေါ်စတင်ခြင်းနှင့်အမူအကျင့်စွဲကြာချိန်၏အသက်အရွယ်လူနာလိင်အကြားအသင်းအဖွဲ့အကဲဖြတ်။ GD, IGD, သမဝါယမနှင့်လုပ် SA အကြားကွာခြားချက်များအမူအကျင့်စွဲမျိုးကွဲများ၏အလားအလာစီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍအပေါ်အလင်းသွန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူ, စမျးသပျခဲ့သညျ။
လိင်, ဆိုးဝါးနှင့်အတူစတင်ခြင်းနှင့်ကြာချိန်နှင့် psychopathological ပြည်နယ်၏အစည်းအရုံး
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များတစ်ခုလုံးအဖြစ်, ဆက်ဆံရေး၏တိကျသောပုံစံအမူအကျင့်စွဲရောဂါပေါ်မူတည်။ ကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။ တစ်ခုလုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သည်အပြုအမူစွဲလမ်းမှု၏ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သည့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပတ်သက်သောလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အသစ်များကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ပြောင်းလဲခြင်း၏ထည့် ၀ င်မှု၊ စတင်ခြင်း၊ ရောဂါ၏ကြာရှည်မှုသို့မဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များသည်ရောဂါအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်လူနာများအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်။ လိင်။ ယခင်လေ့လာမှုများသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများတွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူရလဒ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၊1, 48).
စတင်ခြင်း၏သက်ဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုများသည်ရောဂါရှာဖွေရေးပုံစံနှင့်လူနာများ၏လိင်အပေါ်တွင်လည်းမူတည်နေသည်။ ဤအလားအလာရှိသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် GD နှင့် CB တို့အတွက်အထူးထင်ရှားသည်။ က) GD တွင်၊ အစောပိုင်းစတင်ခြင်းသည်အမျိုးသားများနှင့်ခ) ပို၍ ပြင်းထန်သောဆက်စပ်မှုနှင့် CB တို့နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အစောပိုင်းစတင်ခြင်းသည်အမျိုးသမီးများ၏စွဲလမ်းမှုပြproblemနာ၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသည် ( ယခင်ကတင်ပြခဲ့သည့်စပျစ်သီးပြွတ်လေ့လာမှုများနှင့်ငုပ်လျှိုးနေသည့်ပရိုဖိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများနှင့်အညီဖြစ်သည်။18, 49).
စတင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားစွဲလမ်းမှု၏ကြာရှည်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုပုံစံသည်ရောဂါရှာဖွေရေးအမျိုးအစားနှင့်ပါဝင်သူများ၏လိင်အပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသည်။ GD တွင်အစောပိုင်းအသက်အရွယ်သည်အမျိုးသားများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောအသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အထီးနမူနာများတွင် etiological သုတေသနနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ပုံအရစတင်ခြင်း၏သက်တမ်းသည် GD ဆက်စပ်မှုများ (ဥပမာရောဂါနှင့်ပြင်းထန်သောရောဂါနှင့်ဆက်စပ်မှု) နှင့်အသစ်ရှာဖွေမှုအဆင့်များကြားတွင်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေသည့်ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆသည်။ (11).
သမဝါယမမှာတော့အစောပိုင်းစတင်ခြင်းအမျိုးသမီး Self-TRANSCEND အတွက်ဆုလာဘ်မှီခိုခြင်းနှင့်နိမ့်ရမှတ်မြင့်မားနှင့်အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းအတွက်အနိမ့်ရမှတ်များနှင့်အမျိုးသားများတွင် Self-ညွှန်ကြားနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမြင့်မားနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤရလဒ်သည်ယောက်ျားကပိုရည်မှန်းချက်-oriented, ထိရောက်သောနှင့် Self-ယုံကြည်မှုပါလိမ့်မယ်နေချိန်မှာဒီအခွအေနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကိုအမျိုးသမီးများ, သာ. ကြီးခွင့်ပြုချက်ရှာကြံရန်နှင့်ဒုက္ခသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပိုမိုအခက်အခဲဖော်ပြပိုမို predisposed ဖြစ်နိုင်ကြောင်းညွှန်ပြနိုင်ဘူး။ ထို့အပြင်သမဝါယမအုပ်စုတစ်စုသည်ရောဂါပိုရှည်ကြာချိန် (ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပုံရသည်ဖြစ်သောပိုမိုမြင့်မားဇွဲ, Self-ညွှန်ကြားနှင့် Self-TRANSCEND နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်50, 51) ။ အဆိုပါလုပ် SA အုပ်စုတွင်အမျိုးသမီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မရှိခြင်းပေးထားသောကြောင့်ဒီအမူအကျင့်စွဲနှင့်အတူလူနာအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအတိုင်းအတာများနှင့်လိင်အကြားအသင်းအဖွဲ့များစေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကိုပိုမိုကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်မျှမျှတတနမူနာထည့်သွင်းရန်အဘို့အဒါဟာအကျိုးရှိသောပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့လုပ် SA နမူနာ GD လူနာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရှာကြံအသစ်အဆန်းများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ထောက်ခံနှင့် Self-ညွှန်ကြား၏အရေးကြီးအနိမ့်အဆင့်ဆင့်ကြောင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြဘူး။
(အများဆုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့စာရင်းအင်းပါဝါကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်) တစ်ခုခြုံငုံကြီးမားသောနမူနာအရွယ်အစားရှိခြင်းနေသော်လည်းအချို့သောအုပ်စုများအတွက်လူနာအရေအတွက်ကအတော်လေးသေးငယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အလားတူပင်ကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအမူအကျင့်စွဲခြင်းနှင့်လိင်၏ပျံ့နှံ့မှုအကြားအနီးကပ်ဆက်ဆံရေး, ယောက်ျားမိန်းမတို့၏ဖြန့်ဖြူးသည့်အုပ်စုများအကြားအလွန်မညီမျှမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာနမူနာဆက်တိုက်တစ်ဦးကိုကိုးကားကုသမှုယူနစ်တက်ရောက်ခဲ့သည်နှင့်ပါဝင် / ဖယ်စံတွေ့ဆုံခဲ့သူအပေါင်းတို့သည်လူနာပါဝင်သည်ကြောင်း, သို့သော်စောဒကတက်ရပါမည်, ထို့ကြောင့်အဆိုပါကျားမဖြန့်ဖြူး (ဤပြဿနာကိုကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်ရာနှင့်အတူအကြိမ်ရေနဲ့ကိုက်ညီ52), ငါတို့ရလဒ်များကိုမှမြင့်သောပြင်ပတရားဝင်မှုကိုပေးသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒီအလုပ်လူနာများ၏လိင်, အသက်, နှင့်အထောက်အကူပြုရောဂါ၏ကြာချိန်ကိုသိရန်ရည်ရွယ်သည် အထူးသ စပိန်အတွက်အထူးပြုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုယူနစ်မှာအမြင့်မားဆုံးပျံ့နှံ့မှတ်ပုံတင်ရန်, ထို့ကြောင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သီးသန့်အုပ်စုများဆန်းစစ်ခဲ့ကြသောအမူအကျင့်စွဲရန်။ အနာဂတ်သုတေသနတွင်တစ်ပြိုင်တည်း-comorbid အပြုအမူစှဲတင်ပြသူကိုလူနာများ၏လက်တွေ့ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်ထိုအ variable တွေကိုများ၏အလှူငွေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဒီဇိုင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနနှစျယောကျအားသာချက်ကြီးနမူနာအရွယ်အစားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော BA ဘွဲ့များအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံတွေ့ဆုံရန်သူကိုဘာသာရပ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများ၏ပါဝင်ကြသည်။ နောက်ထပ်သက်ဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကို၎င်း BA, ခြုံငုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏ပြင်းထန်မှုကိုဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မျိုးစုံစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစီအမံ၏ပါဝင်မှုများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြစ်ပါတယ်။
ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များသည်အပြုအမူစွဲလမ်းမှု၏ဘက်ပေါင်းစုံပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းသစ်နှင့်ပတ်သက်သောပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများကိုပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စတင်ခြင်း၊ ရောဂါ၏ကြာရှည်မှုသို့မဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များကဲ့သို့သော variable များ၏အလှူငွေသည်ရောဂါအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းနှင့်လူနာများအပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သင့်သည် လိင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုတစ်ခုချင်းစီကိုအမူအကျင့်စွဲရောဂါ၏စတင်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြသောအခြေခံယန္တရားများဖော်ပြများအတွက်ပေါင်းစည်းမော်ဒယ်စမ်းသပ်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ရှုပ်ထွေးပြီးဘက်ပေါင်းစုံ - ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးသောဖြစ်စဉ်များနည်းတူမတူကွဲပြားသောဒေသများရှိထပ်မံလေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။ etiological research (ဥပမာ - အာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၊ တိကျသောဒေသများ၊ ကွန်ရက်များနှင့်အလုပ်အမှုဆောင် / သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများပါ ၀ င်သည်) နှင့်လက်တွေ့လေ့လာမှုများ (ပြီးပြည့်စုံမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်) တစ်ခုချင်းစီကိုရောဂါရှာဖွေအခြေအနေ၏ phenotypes နှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း) ။ နောက်ဆုံး၌ etiologically နှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုတည်ဆောက်ပုံကိုအသေးစိတ်နားလည်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲရခြင်း၏နောက်ခံအကြောင်းရင်းများသည်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုကြိုးပမ်းမှုများကိုတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ လူမှုရေး - လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအသွင်အပြင်များနှင့်အထူးသဖြင့်အခြားပြင်ပကိန်းရှင်များပေါ် မူတည်၍ လူနာများ၏လက်တွေ့အခြေအနေတွင်ရှုပ်ထွေးသောပါဝင်မှုရှိသောလိင်ကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။ စိတ်ကျန်းမာရေးကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းများအားရောဂါရှာဖွေခြင်းအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအတွက်မြင့်မားသောခွဲခြားဆက်ဆံမှုစွမ်းရည်ရှိခြင်းနှင့်တိကျသောဖြစ်တည်မှုပုံစံကိုလုံလောက်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်ထိရောက်သော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုအစီအစဉ်များကိုအကျိုးပြုသည်။ ၎င်းသည်တိုင်းတာမှုနည်းသောနည်းများနှင့်စံသတ်မှတ်ထားသောကုထုံးအစီအစဉ်များ (CB သို့မဟုတ် SA ကဲ့သို့) နည်းပါးသောအပြုအမူစွဲလမ်းမှုအချို့အတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။
SV-S က, RG, FF-A, JM နှင့် SJ-M ယခင်ရလဒ်များကိုအခြေခံပြီးစမ်းသပ်မှုနှင့်မိုင်-B က, NA ၏လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ, MG-P ကို, လူတွေလည်းရှိနေတယ်-G, ကို MB နှင့် LM ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ SV-S က, RG, VM က-R, GM က-B က, TS, FF-တစ်ဦးနှင့် SJ-M, ထိုစမ်းသပ်မှုကောက်ယူဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, နှင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ပထမဦးဆုံးမူကြမ်းရေးသားခဲ့သည်။ SJ-M, TS, GM က-B က, RG နှင့် FF-တစ်ဦးကထပ်မံလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်အချိန်တွင်နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကိုပု Ministerio က de Economía y က Competitividad (ထောက်ပံ့ကြေး PSI2011-28349 နှင့် PSI2015-68701-R) မှတဆင့်လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ FIS PI14 / 00290, FIS PI17 / 01167 နှင့် 18MSP001-2017I067 အဆိုပါ Ministerio က de Sanidad, Servicios လူမှုရေးအီး Igualdad ထံမှအကူအညီကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ISCIII ၏အစပျိုးများမှာနှစ်ဦးစလုံး၏ CIBER Fisiología Obesidad y ကNutrición (CIBERobn) နှင့် CIBER Salud စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (CIBERSAM) ။ GMB သင့်ရဲ့အနာဂတျမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း, ဥရောပလူမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (ESF) "ESF" ကပူးတွဲရန်ပုံငွေပေးရန်တစ်ဦး predoctoral AGAUR ထောက်ပံ့ငွေ (2018 FI_B2 00174) ကထောက်ခံသည်။ အဆိုပါတက္ကသိုလ်များနှင့် Business ဝန်ကြီးဌာန၏သုတေသနများအတွက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံး၏ထောက်ခံမှုနှင့် Catalonia ၏အစိုးရအဖွဲ့၏အသိပညာအတူ။ ကျနော်တို့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာထောက်ခံမှုများအတွက် CERCA အစီအစဉ်နှင့် Generalitat က de Catalunya ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်း Fondo Europeo က de Desarrollo ဒေသဆိုင်ရာ (Federation) နှင့်၎င်းတို့၏အစီအစဉ်ကို "UNA manera က de hacer ယူရိုပါလိဂ်" (ဥရောပ Build မှတစ်လမ်း) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1. Fattore L ကို, Melis M က, Fadda P ကို, Fratta ဒဗလျူ စွဲလမ်းမမှန်အတွက်လိင်ကွဲပြားမှု. တပ်ဦး Neuroendocrinol။ (2014) 35: 272-84 ။ 10.1016 / j.yfrne.2014.04.003 [PubMed] [CrossRef]
2. je, Potenza MN, Weinstein တစ်ဦးက, Gorelick DA ပေးသနား။ အမူအကျင့်စှဲဖို့နိဒါန်း. နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်ချိုးဖောက်မှုများ။ (2010) 36: 233-41 ။ 10.3109 / 00952990.2010.491884 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
3. Leeman RF, Potenza MN ။ အမူအကျင့်စွဲလမ်း၏ neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ၏တစ်ဦးကိုပစ်မှတ်ထားပြန်လည်သုံးသပ်: သုတေသနတစ်ခုထွန်းသစ်စဧရိယာ. J ကိုစိတ်ရောဂါနိုင်သလား။ (2013) 58: 260-73 ။ 10.1177 / 070674371305800503 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
4. Probst CC ကို, ဗန် Eimeren တီ ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ပုံမမှန်ခြင်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒ. Curr Neurol neuroscience ကိုယ်စားလှယ်။ (2013) 13:386. 10.1007/s11910-013-0386-8 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
5. Robbins TW, Clark ကအယ်လ် အမူအကျင့်စှဲ. Curr Opin Neurobiol။ (2015) 30: 66-72 ။ 10.1016 / j.conb.2014.09.005 [PubMed] [CrossRef]
6. Koob gf, Volkow ND ။ စွဲလမ်း၏ Neurocircuitry. Neuropsychopharmacology (2010) 35: 217-38 ။ 10.1038 / npp.2009.110 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
7. MacLaren VV, အကောင်းဆုံး LA က။ ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်အကွိမျမြားစှာစွဲလမ်းအပြုအမူတွေ: အတိုတောင်း PROMIS မေးခွန်းလွှာများအတွက်ကျောင်းသားစံချိန်စံညွှန်း. စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ (2010) 35: 252-55 ။ 10.1016 / j.addbeh.2009.09.023 [PubMed] [CrossRef]
8. Guillou-Landréat M က, Grall-Bronnec M က, Vénisse JL ။ စွဲ comportementales. စာနယ်ဇင်း Medicale (2012) 41: 1271-5 ။ 10.1016 / j.lpm.2012.07.024 [PubMed] [CrossRef]
9. Alvarez-Moya EM, Jimenez-Murcia S က, Aymamí MN, Gomez-Pena M က, Granero R ကို, Santamaría J ကို, wt အယ်လ်။ တစ်ဦးရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားတွေနမူနာ၏ Subtype လေ့လာမှု. J ကိုစိတ်ရောဂါနိုင်သလား။ (2010) 55: 498-506 ။ 10.1177 / 070674371005500804 [PubMed] [CrossRef]
10 ။ Black က DW, Shaw က M, Coryell W က, Crow R ကို, မက်ကော်မစ် B, Allen ကဂျေ early- နှိုင်းယှဉ်အကြာတွင်-စတင်ခြင်း: non-ကုသမှုနမူနာအတွက် DSM-IV ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း၏စတင်ခြင်းမှာအသက်အရွယ်. Compr Psychiatric ။ (2015) 60: 40-6 ။ 10.1016 / j.comppsych.2015.04.007 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
11 ။ Jimenez-Murcia S က, Granero R ကို, Tarrega S က, Angulo တစ်ဦးက, et al ဖာနန်ဒက်ဇ-Aranda က F, Arcelus J ကို။ ။ လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါတစ်လမ်းကြောင်းကိုမော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်စတင်ခြင်း၏အသက်အာမခံအခန်းကဏ္ဍ. J ကို Gamble လုံး။ (2016) 32:327–40. 10.1007/s10899-015-9537-y [PubMed] [CrossRef]
12 ။ Verdura Vizcaíno EJ, Fernandez-Navarro P ကို, Petri N ကို, Rubio, G, Blanco C. အစောပိုင်း-စတင်ခြင်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနောက်ပိုင်းတွင်-စတင်ခြင်းရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအကြားကွာခြားချက်များ: အရက်နှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် epidemiological စစ်တမ်းမှအချက်အလက်များကို (NESARC). စှဲမွဲမှု (2014) 109: 807-13 ။ 10.1111 / add.12461 [PubMed] [CrossRef]
13 ။ Duroy: D, Gorse P ကို, Lejoyeux အမ် Parisian ကျောင်းသားများကိုတွင်အွန်လိုင်း compulsive ဝယ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ. စှဲလမျးသူပြုမူနေ။ (2014) 39: 1827-30 ။ 10.1016 / j.addbeh.2014.07.028 [PubMed] [CrossRef]
14 ။ Maraz တစ်ဦးက, Eisinger တစ်ဦးက, Hende B, et al မြို့ပြ R ကို, Paksi B, Kun B က။ ။ compulsive ဝယ်အပြုအမူတိုင်းတာ: သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောအကြေးခွံများနှင့်ပျံ့နှံ့၏ psychometric တရားဝင်မှုအထွေထွေသောလူဦးရေနှင့်စျေးဝယ်စင်တာများအတွက်. စိတ်ရောဂါကုသမှု Res။ (2015) 225: 326-34 ။ 10.1016 / j.psychres.2014.11.080 [PubMed] [CrossRef]
15 ။ Maraz တစ်ဦးက, ဗန်တွင်းချောက်ကမ်းပါး W က, Demetrovics Z. ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်စျေးဝယ်ကုန်တိုက်ဧည့်သည်များအတွက် compulsive ဝယ်ရောဂါ၏တရားဝင်မှုတည်ဆောက်. စိတ်ရောဂါကုသမှု Res။ (2015) 228: 918-24 ။ 10.1016 / j.psychres.2015.04.012 [PubMed] [CrossRef]
16 ။ Muller တစ်ဦးက, Mitchell က je, က de Zwaan အမ် compulsive ဝယ်. နံနက် J ကိုစွဲ။ (2015) 24: 132-7 ။ 10.1111 / ajad.12111 [PubMed] [CrossRef]
17 ။ Sussman S က, Lisha N ကို, Griffiths ကအမ် အဆိုပါစှဲ၏ပျံ့နှံ့: အများစု၏ပြဿနာတစ်ခုသို့မဟုတ်လူနည်းစု? Eval ကျန်းမာရေးပါမောက္ခ (2011) 34: 3-56 ။ 10.1177 / 0163278710380124 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
18 ။ Mueller တစ်ဦးက, Mitchell က je, Black က DW, Crosby သည် RD, Berg က K ကိုက de Zwaan အမ် compulsive ဝယ်ရောဂါနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏နမူနာထဲမှာငုပ်လျှိုးနေပရိုဖိုင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် comorbidity. စိတ်ရောဂါကုသမှု Res။ (2010) 178: 348-53 ။ 10.1016 / j.psychres.2010.04.021 [PubMed] [CrossRef]
19 ။ Griffiths က MD, Meredith အေ ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲလမ်းနှင့်၎င်း၏ကုသမှု. J ကို Contemp Psychother။ (2009) 39:247–53. 10.1007/s10879-009-9118-4 [CrossRef]
20 ။ Weinstein လေး။ ကွန်ပျူတာနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားပွဲအသုံးပြုသူများနှင့် Non-ဂိမ်းသည်အသုံးပြုသူများအကြားစွဲလမ်း-တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်. နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု (2010) 36: 268-76 ။ 10.3109 / 00952990.2010.491879 [PubMed] [CrossRef]
21 ။ Haagsma MC, Pieterse ME, ပီတာ O. နယ်သာလန်နိုင်ငံပြဿနာကဗီဒီယိုဂိမ်းကစားများ၏ပျံ့နှံ့. Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw။ (2012) 15: 162-168 ။ 10.1089 / cyber.2011.0248 [PubMed] [CrossRef]
22 ။ et al Buono FD, Sprong ME, လွိုက် DP, Cutter CJ, Printz DMB, Sullivan က RM ။ ။ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားနှောင့်နှေးလျှော့: ဂိမ်းကစားသူတို့တွင်အချိန်ကြာချိန်နှိုင်းယှဉ်ရန်. Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw။ (2017) 20: 104-108 ။ 10.1089 / cyber.2016.0451 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
23 ။ Kneer J ကို, Rieger: D, အိုင်ဗရီကို့စ် JD, ဖာဂူဆန် C. အင်တာဗျူးကစားသမားများနှင့်တိုင်ပင်မှူးမတ်: ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂိမ်းစွဲလမ်းများအတွက်အန္တရာယ်အချက်များ၏အသိအမြင်. int J ကို Ment ကနျြးမာရေးစွဲ။ (2014) 12:585–99. 10.1007/s11469-014-9489-y [CrossRef]
24 ။ Weinstein တစ်ဦးက, အဘူ HB, အရှေ့တီမောတစ်ဦးက, Mama Y. နှောင့်နှေးလျှော့, အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေနှင့်အင်တာနက်နှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားမမှန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအကြားငြင်းပယ်ခံရ sensitivity ကို. J ကိုပြုမူနေစွဲ။ (2016) 5: 674-82 ။ 10.1556 / 2006.5.2016.081 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
25 ။ Erez, G, Pilver အီး, Potenza MN ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse နှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်အကြားအသင်းအဖွဲ့များအတွက်ကျား-related ကွဲပြားခြားနားမှု. J ကိုစိတ်ရောဂါ Res။ (2014) 55: 117-25 ။ 10.1016 / j.jpsychires.2014.04.009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
26 ။ Garcia က FD, Thibaut အက်ဖ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစှဲ. နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု (2010) 36: 254-60 ။ 10.3109 / 00952990.2010.503823 [PubMed] [CrossRef]
27 ။ Kraus SW, Voon V ကို, Potenza MN ။ တစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ compulsive သငျ့သလော စှဲမွဲမှု (2016) 111: 2097-106 ။ 10.1111 / add.13297 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
28 ။ Krueger RB ။ hypersexual သို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအမေရိကန်စိတ်ရောဂါ Association ကဒီရောဂါ၏ငြင်းပယ်ခံရရှိနေသော်လည်း ICD-10 နှင့် DSM-5 သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်. စှဲမွဲမှု (2016) 111: 2110-1 ။ 10.1111 / add.13366 [PubMed] [CrossRef]
29 ။ Derbyshire KL, Grant က je ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် Neurocognitive တွေ့ရှိချက်: တစ်ပဏာမလေ့လာမှု. J ကိုပြုမူနေစွဲ။ (2015) 4: 35-6 ။ 10.1556 / 2006.4.2015.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
30 ။ တတ်ကြ၏ JM, et al Fernandez-Aranda က F, Granero R ကို, Aragay N ကို, Mallorquí-Bague N ကို, Ferrer V ကို။ ။ လိင်စွဲလမ်းနှင့်လောင်းကစားရောဂါ: တူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု. Compr Psychiatric။ (2015) 56: 59-68 ။ 10.1016 / j.comppsych.2014.10.002 [PubMed] [CrossRef]
31 ။ Kastner RM, Sellbom အမ် ကောလိပ်ကျောင်းသားအတွက် Hypersexuality: psychopathy ၏အခန်းကဏ္ဍကို. Pers Individ Dif။ (2012) 53: 644-9 ။ 10.1016 / J.PAID.2012.05.005 [CrossRef]
32 ။ American Psychiatric Association ။ စိတ်ရောဂါ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းကို manual ။ 5th ed ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ: American Psychiatric Association; (2013) ။
33 ။ Petri N. အမူအကျင့်စွဲစေ: DSM-5? ကျော်လွန်.။ မှာအွန်လိုင်းရရှိနိုင် (2015): https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=syImCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Behavioral+Addictions:+DSM-5+and+Beyond+Edited+by+Dr+Nancy+Petry&ots=kT8U-edD7G&sig=EZ-Cr8KK7sTTDpsMbWdV2pf5ZuQ (Access မေလ 18, 2018)
34 ။ Petri မိုင်, Zajac K ကို Ginley MK ။ စိတ်ရောဂါအဖြစ်အမူအကျင့်စှဲ: ဖြစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော Annu ဗြာ Clin Psychol ။ (2018) 14:399–423. 10.1146/annurev-clinpsy-032816-045120 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
35 ။ Stinchfield R. ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, တရားဝင်မှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် DSM-IV အဖြေရှာတဲ့စံ၏အတိုင်းအတာများခွဲခြားတိကျမှန်ကန်မှု. နံနက် J ကို Psychiatric ။ (2003) 160: 180-2 ။ 10.1176 / appi.ajp.160.1.180 [PubMed] [CrossRef]
36 ။ et al Jimenez-Murcia S က, Stinchfield R ကို, Alvarez-Moya အီး, Jaurrieta N ကို, Buenos B, Granero R ကို။ ။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု, တရားဝင်မှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် DSM-IV အဖြေရှာတဲ့စံ၏အတိုင်းအတာတစ်ခုစပိန်ဘာသာပြန်ချက်၏ခွဲခြားတိကျမှန်ကန်မှု. J ကို Gamble လုံး။ (2009) 25:93–104. 10.1007/s10899-008-9104-x [PubMed] [CrossRef]
37 ။ McElroy SL, Keck PE, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး HG, Smith က JM, Strakowski သည် SM ။ compulsive ဝယ်: 20 ဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးအစီရင်ခံစာ. J ကို Clin Psychiatric ။ (1994) 55: 242-248 ။ [PubMed]
38 ။ Muller တစ်ဦးက, Mitchell က J ကို, က de Zwaan အမ် compulsive ဝယ်. နံနက် J ကိုစွဲ။ (2015) 24:132–7. 10.1007/s00278-010-0725-z [PubMed] [CrossRef]
39 ။ Griffiths က MD, Hunt က N. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ဂိမ်းကစား: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်လူဦးရေဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း. J ကိုရပ်ရွာက Apple Soc Psychol။ (1995) 5: 189-193 ။ 10.1002 / casp.2450050307 [CrossRef]
40 ။ Griffiths က MD, Hunt က N. မြီးကောင်ပေါက်နေဖြင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းအပေါ်မှီခိုနေ. Psychol ကိုယ်စားလှယ်။ (1998) 82: 475-80 ။ 10.2466 / pr0.1998.82.2.475 [PubMed] [CrossRef]
41 ။ ယား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲ, 4th Edn ။ စာသားမတည်းဖြတ်မူ (DSM-IV-TR) ။ (2000) ။
42 ။ ပုံတူပွားခြင်း CR ။ အဆိုပါစိတ်ထားနှင့်အက Character Inventory-Revised။ စိန့်လူးဝစ်, MO ကို: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ Psychobiology များအတွက်စင်တာ, ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်, (1999) ။
43 ။ et al Gutierrez-Zotes ဂျာ Bayon ကို C, မွန်ဆာရတ်က C, Valero J ကို, Labad တစ်ဦးက, ပုံတူပွားခြင်း CR ။ ။ Revised စိတ်ထားနှင့်အက Character Inventory (TCI-R)။ standardization နှင့်အထွေထွေလူဦးရေနမူနာများတွင်စံတန်ဖိုးဒေတာ။ Actas Españolas Psiquiatr။ (2004) 32: 8-15 ။ [PubMed]
44 ။ Derogatis L. SCL-90-R ကို။ အုပ်ချုပ်ရေး, အမှတ်ပေးနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို manual။ လက်တွေ့ P. Baltimore, MD (1990) ။
45 ။ Derogatis L. SCL-90-R ကို။ Cuestionario က de 90 Síntomas-လက်စွဲစာအုပ်။ မက်ဒရစ်: လက်ဖက်ရည်အယ်ဒီတာ, (2002) ။
46 ။ Jimenez-Murcia S က, Aymamí-Sanromà M က, Gomez-Pena M က, Alvarez-Moya အီး, Vallejo ဂျေ protocols များ De Tractament Cognitivoconductual Pel Joc Patològicငါ D'altres Addiccions အဘယ်သူမျှမTòxiques။ ဘာစီလိုနာ: ဆေးရုံ Universitari က de Bellvitge, Departament က de salut, Generalitat က de Catalunya; (2006) ။
47 ။ Hollingshead AB ။ လူမှုအဆင့်အတန်းလေး Factor အညွှန်း။ New Heaven, CT: ယေးလ်တက္ကသိုလ်; (1975)
48 ။ Granero R ကို, et al Fernandez-Aranda က F, Mestre-Bach, G, ဘဏ္ဍာစိုး T က, Baño M က, Agüera Z ကို။ ။ compulsive ဝယ်အပြုအမူများအတွက်သိမှုအမူအကျင့်ကုထုံး: ကုသမှုရလဒ်ကို၏ခန့်မှန်း. EUR Psychiatric ။ (2017) 39: 57-65 ။ 10.1016 / j.eurpsy.2016.06.004 [PubMed] [CrossRef]
49 ။ Granero R ကို, et al Fernandez-Aranda က F, Baño M က, ဘဏ္ဍာစိုး T က, Mestre-Bach, G, Del Pino-Gutierrez တစ်ဦး။ ။ လိင်, အသက်, စတင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များပေါ်အခြေခံပြီး compulsive ဝယ်ရောဂါ Cluster. Compr Psychiatric ။ (2016) 68: 1-10 ။ 10.1016 / j.comppsych.2016.03.003 [PubMed] [CrossRef]
50 ။ Granero R ကို, et al Fernandez-Aranda က F, Mestre-Bach, G, ဘဏ္ဍာစိုး T က, Baño M က, del Pino-Gutierrez တစ်ဦး။ ။ compulsive ဝယ်အပြုအမူ: ကအခြားအမူအကျင့်စွဲလမ်းနှင့်အတူလက်တွေ့နှိုင်းယှဉ်. တပ်ဦး Psychol။ (2016) 7: 914 ။ 10.3389 / fpsyg.2016.00914 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
51 ။ Granero R ကို, Fernandez-Aranda က F, ဘဏ္ဍာစိုး T က, et al Mestre-Bach, G, Baño M က, del Pino-Gutierrez တစ်ဦးက, Moragas L ကို။ ။ compulsive ဝယ်အပြုအမူ: လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါနှင့်အတူ comorbidity ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ. တပ်ဦး Psychol။ (2016) 7: 625 ။ 10.3389 / fpsyg.2016.00625 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [CrossRef]
52 ။ Jimenez-Murcia S က, Fernandez-Aranda က F, Granero R ကို, Menchón JM ။ စပိန်နိုင်ငံတွင်လောင်းကစား: အတွေ့အကြုံ, သုတေသနနှင့်မူဝါဒအပေါ် update ကို. စှဲမွဲမှု (2014) 109:1595-601. 10.1111/add.12232 [PubMed] [CrossRef]